Igbo, John: Lesson 036 - Kraịst na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ma na-ekpe ụwa ikpe (Jọn 5:20-30) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 036 (Christ raises the dead and judges the world)
20 N'ihi na Nna-ayi nāhu Ọkpara-Ya n'anya, nēgosi kwa Ya ihe nile nke Ya onwe-ya nēme. Ọ ga-egosi ya ọrụ ka ukwuu karịa ndị a, ka i wee ju gị anya. 21 N'ihi na dika Onye-nwe-ayi nēme ka ndi nwuru anwu si n'ọnwu bilie, Ọ nēme kwa ka ha di ndu; otú a ka Ọkpara ahu nēme kwa ka onye ọ nāchọ di ndu. 22 N'ihi na Nna-ayi adighi-ekpe onye ọ bula ikpe, kama O nyewo Ọkpara-Ya ikpé nile, 23 ka madu nile we nye Ọkpara-Ya nsọ, dika ha nāsọpuru Nnam. Onye nādighi-asọpuru Ọkpara adighi-asọpuru Nna Nke zitere Ya.
Lee otú ọrụ ndị a si dị ike, ọ gaghị ekwe mmadụ omume, mana Jizọs nwere ike ịrụ ha. Nna ahụ na-enyefe ha n'aka Ọkpara ahụ ka ha gafee. N'ebe a, anyị na-ahụ àgwà abụọ e buru n'amụma n'Akwụkwọ Nsọ na-ekwu banyere Kraịst. Ndị Juu na-atụ anya ka nwoke ahụ na-ahụ ha: Ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ, na ikpe ikpe eziokwu. Ha abụọ, Jizọs kwuru na ya onwe ya. N'oge gara aga, Jizọs buru amụma n'ihu ndị iro ya na ọ bụ ya bụ Onye Nzọpụta nke ga-ekpe ikpe, ọ bụ ezie na ha weere ya dị ka onye nzuzu ma ọ bụ nkwulu. Ha kpebiri igbu ya. Site na nkwenye a Jisos choro igbanwe ha ma duo ha ka ha chee echiche ziri ezi ma chegharia n'eziokwu.
Chineke anyi abughi onye nbibi, ma obu onye na-enye ndu, n'achoghi onwu onwu nke onye nmehie mana oge ya si na nduhie ya gaa ndu. Onye na-ahapụ Chineke na-ala n'iyi nwayọọ, mmụọ, mkpụrụ obi na ahụ. Mana, onye ahu nke na-abia nso Kraist bu ndu na ndu ndu ebighebi. Onye nzoputa na-acho ka mmeghari gi na edemede. Ị ga-ege ntị n'olu ya? Ka ị na-anọgide na ndụ nke mmehie na ikpe ọmụma?
Site na mgbe ebighi ebi eburu mbara igwe na eziokwu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị mmadụ enweghị nlekọta nke Onyenwe ha, na-egbu ma na-aghọgbu ibe ha, mana eziokwu adịghị agbanwe agbanwe. Ụbọchị ikpé bụ ụbọchị ụtụtụ dị ukwuu. Ọbọ Chineke ga-adakwasị mkpasu iwe niile na karịsịa maka mmeso ọjọọ nke ndị inyom di ha nwụrụ na ndị na-adịghị ike. Chineke etinyewo ikpe niile nye Kraịst, Ọ ga-ekpekwa ndị nile, asụsụ na okpukpe nile ikpe. Jizos bu madu n'enweghi nmehie, ya mere o ghotara aru madu ayi ma chee na ayi adighi ike. Ikpe ya ziri ezi. Mgbe ọ ga-apụta n'ebube ya, ebo niile dị n'ụwa ga-akwa ákwá n'ihi na ha leghaara Onyeikpe anya, leda ya anya ma jụ ya. Ị ghọtara nke a?
Mmadụ nile ga-ehulata ikpere n'ihu Ọkpara. Ndị na-eleghara ofufe Kraịst anya n'ụwa ga-asọpụrụ ya n'egwu na ịma jijiji. Kraist ruru eru, ike, amamihe, nsopuru na otuto (Nkpughe 5:12). O meela ka ụwa dị n'udo n'ihi Chineke n'ihi na Ọ bụ Nwa atụrụ dị umeala n'obi nke e gburu n'ihi anyị. Chineke na Okpara di n 'udi nke ima na ike, obughi nani na olu, kama n'adighi nma na otuto nke enyere ha. Ọ bụ ya mere Jizọs ji jụ ofufe nke onye ọ bụla mgbe ọ nọ n'ụwa. Anyị kwesịrị ịsọpụrụ Ọkpara dịka anyị na-eme Nna. Anyị nwere ike ịkpọ Ọkpara ahụ n'ekpere ka anyị na-eme Nna anyị nke eluigwe.
Onye niile na-ajụ Kraịst ma ọ bụ na-eleghara ya anya jụrụ Nna ya. Onye Ebigh-ebi ebighiebi ihọrọ Okpara. Isi ihe mere ndị na-agọnahụ Ọkpara Kraịst na ofufe ya bụ echiche ọjọọ ha. Ha adighi njikere ighota ya, ya mere ha apugh imata Chineke n'eziokwu.
24 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Onye na-anụ okwu m ma kwere n'onye zitere m nwere ndụ ebighị ebi, ọ dịghị abata n'ikpe, kama o siwo n'ọnwụ bilie gaa ná ndụ.
Onye ji obi ụtọ nụ Oziọma Kraịst ma kwere na ụmụ ya ga-enweta ndụ ebighi ebi. Ndụ nke na-adịghị amalite mgbe ọ nwụrụ, ma n'ụwa a site na Mmụọ Nsọ. Mmụọ a na-adakwasị gị n'ihi na ị kwenyere na Nna na Ọkpara. Ọ bụghị mmadụ nile ghọtara okwu nke okwu Kraịst ọbụna ma ọ bụrụ na ha anụwo ha ugboro puku ma gụọ ma nyochaa ọdịnaya ha. Ha agaghi ekwu banyere amara nke Ọkpara maob ghi ije ije nime Mmo Nso. Ezi okwukwe bu ntukwasi obi na Kraist na ikwado ya. Ibanye na nkekọ a na Kraịst ị na-agu n'onye ezi omume, nwere onwe gị pụọ na ikpe, n'ihi na ọ bụ okwukwe na-azọpụta gị abụghị ọrụ. Ịhụnanya Kraịst kpuchiri ndị na-agbaba n'obe ma kpochapụ mmehie ha ma mee ka akọ na uche dị ọcha. Ọ na-agba anyị ume ịbịakwute Chineke n'ihi na Ebighị Ebi aghọwo Nna anyị site na ịmụ mmadụ ọzọ. Ihe omumu ayi bu ihe si na nmuta ayi.
Ị ghọtara nkwa dị ukwuu nke Kraịst? A tọhapụrụ gị na ọnwụ na egwu ya na ị na-adị ndụ ebighi ebi site na amara nke Kraịst. Iwe Chineke agaghị adakwasị gị.
Okwukwe gi n'ime Kraist agbanwewo gi ma ndu ebighi ebi di gi. Njikọ anyị na Jizọs abụghị nanị ọgụgụ isi, kama ọ bara uru, dị adị n'ezie. Enweghi nzoputa karia karia na anyi no n'ime Kraist. Muta amaokwu 24 site na obi, ma dozie ndụ gị na ya ma na anyị ga-ezute na ihu ebighi ebi ihu na ihu.
EKPERE: Anyị na-efe gị Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, n'ihi na ị gbagharala mmehie anyị ma mee ka anyị kweta. Anyị agaghị abanye n'ikpe, n'ihi na ọnụma gị agabigawo anyị. Anyị na-asọpụrụ gị n'ihi na ndụ gị wụsara n'ime anyị, a gbanyụọkwa ọnwụ maka anyị. Anyị na-ebi ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Mee ka anyi guzosie ike nime gi, mee ka aha gi di uku.
Olee ọrụ abụọ dị mkpa Nna m nyere Kraịst ka o mezuo?